Buy DoDo label tape in ရန်ကုန် (3,000 Ks) on ipivi
Tik Tok မှာတရုတ်မလေးတွေသုံးပြတဲ့ V shape ဖြစ်အောင်ကပ်တဲ့ tape လေးတွေပါ
DoDo label tape လေး သူက Korea made ပါ🇰🇷
ပွဲတွေဘာတွေအရေးပေါ်သွားရတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင် မျက်နှာလေးကို လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်လေး V shape လေးဖြစ်သွားအောင် Invisible tape လေးနဲ့ကပ်ပီး shape လှလှလေးဖော်ကြရအောင် 😁 သူကကိုယ်လိုသလို ပုံဖော်လို့ရတယ်😉ကပ်ပုံကပ်နီးလည်းအောက်မှာပုံတင်ပေးထားတယ်နော် 😘 instagram ကနေလည်းဝင်ကြည့်ကြည့်နော်
10 စက္ကန့် အတွင်း V shape မျက်နှာလေး လုပ်လို့ရပြီနော်😍
Korea made Do Do Tape နဲ့ လိုချင်တဲ့နေရာ ကိုဆွဲကပ်လိုက်ရုံနဲ့ အရမ်းလှပတဲ့ မျက်နှာကျ V shape လေးရပြီနော်။
အလှူ ၊ မင်္ဂလာဆောင် ၊မွေးနေ့ပွဲ ၊ပါတီ အရေးပေါ်သွားဖို့ရှိတဲ့ ညီမလေးတွေအတွက် မျက်နှာကျလေးကို လှသွားအောင် အမြန်လုပ်ဖို့လိုလာရင် Do Do ကိုသတိရလိုက်ပါရှင်။
၁၀ စက္ကန့် ဘဲစောင့် နော် !
�- V Shape လိုချင်လား ?
�- မျက်ခုံးပင့်တင်ချင်လား ?
�- နဖူးအရေးကြောင်းဖျောက်ချင်လား ?
တစ်ဘူးမှာ tape အခု 40 ပါတယ်
တစ်ဘူးလုံးများတယ်စမ်းသုံးချင်တယ်ဆိုလဲ ၁၀ ခုစီ ခွဲရောင်းပေးပါမယ်လို့ 😘
တစ်ဘူးလုံး (အခု ၄၀)- 10000
10 ခု - 3000
အမည်:DoDo label tape